Semalt: किन तपाईंलाई स्थानीय डिजिटल मार्केटिंगमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ
हालमा, डिजिटलीकरण र यसबाट प्राप्त हुने फाइदाहरूको कारण, परम्परागत व्यवसायले उनीहरूले डिजिटल मार्केटिंग अँगालेमा अझ बढी फाइदा हुन्छ भनेर महसुस गर्न थालेका छन्।
"मोबाइलको वर्ष" धेरै वर्षदेखि डिजिटल संसारको कुराकानी भएको छ। यो उल्लेख गरिएको छ कि २०१ 2014 लगातार तेस्रो "मोबाइलको वर्ष" थियो। त्यसपछिका वर्षहरू २०१ 2016 सम्म लाइफह्याकका अनुसार यो प्रशंसा प्राप्त भयो। यसले वेब ब्राउज गर्न प्रयोग हुने प्रमुख प्लेटफर्म बन्नको लागि विकास हुँदै गएको मोबाइल उपकरणहरूको क्रमिक वृद्धिलाई जनाउँदछ र विशेष बर्ष होइन।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, एन्ड्र्यू दिहान, स्थानीय डिजिटल मार्केटिंगको अनिवार्यता र यसको वर्तमान महत्त्वको बारेमा अन्तर्दृष्टि दिन्छ।
तथ्या्कले संकेत गर्दछ कि:
२०१'s को लागि फेसबुकको अनुमानित विज्ञापन राजस्व २$ अरब डलर थियो। मोबाइल उपकरणहरूले त्यसको percent० प्रतिशतसम्म बनायो (२१..9 billion अरब)
Matic back प्रतिशतसम्म प्रोग्रामेटिक डिजिटल प्रदर्शन विज्ञापन ट्रेस मोबाइल उपकरणमा फिर्ता।
Million०० मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूसँग, इन्स्टाग्रामले सब भन्दा द्रुत बृद्धि हुने सामाजिक नेटवर्कको रूपमा खडा गर्छ र फेसबुक मार्केटिंगको साथ सजिलैसँग एकीकृत गर्दछ।
सन् १ in in States मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा थ्रीभ एनालिटिक्स, ई-मार्केटर पोष्ट, साना र मझौला व्यवसायहरूका डाटा डेरिभ .ले मोबाइलमा बढी जोड दिएर विज्ञापनमा बढी खर्च गर्ने योजना बनायो। यस निर्णयको कारण अधिक व्यक्तिले स्मार्टफोनको स्वामित्व जारी राख्नु हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाका percent० प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूसँग ComScore द्वारा परिणाममा आधारित स्मार्टफोन छ। स्मार्टफोनहरूले विस्तार गर्न जारी राख्नुका केही कारणहरू यो हुन् किनभने एप्पलले आईफोनको लागि सी-सिरीज निर्माण गर्‍यो, एन्ड्रोइडसँग कम-अन्तका स्मार्टफोनहरू छन् जुन प्राय जसो क्यारियरले दिन्छ, र एक शक्तिशाली दोस्रो हात स्मार्टफोन बजार स्थान।
व्यवसायको फाइदा लिनको लागि केहि अवसरहरू:
गुगल लक्ष्य र विज्ञापन को लागी फेसबुक विज्ञापन।
एक खास स्थानमा प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्न स्न्यापचेट फिल्टरहरू।
येल्प विज्ञापनले येलपमा प्रतिस्पर्धी प्रोफाइलहरूमा व्यवसायहरू राख्न सहयोग गर्दछ।
इन्स्टाग्रामको बृद्धि र लोकप्रियता।
पारम्परिक व्यवसायहरूले डिजिटल ट्रेनको फाइदा लिनुपर्दछ। अन्यथा, शीर्ष खेलाडीहरू निश्चित रूपले तिनीहरूलाई बाहिर लिनेछ।
जब व्यक्तिहरू व्यवसाय र मार्केटिंगको बारेमा कुरा गर्छन्, अमेजन प्लेटफर्म सधैं तिनीहरूको कुराकानीमा बदलिन्छ। 80० मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू अमेजनको प्राइम व्यवसायमा सदस्यता लिन्छन्। अमेजनको लागि वार्षिक सदस्यता शुल्क $ billion बिलियन हो, प्राइम सदस्य खर्चको लागि लेखांकन हुँदैन।
अमेजन ठूला व्यवसायको वर्गमा पर्छ। प्रश्न यो छ कि सानो वा स्थानीय व्यापारले त्यस्ता ठूला कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ। यो धेरै धेरै सम्भव छ तर तिनीहरूको मार्केटर्सबाट धेरै कामको आवश्यक पर्दछ।
सानो र स्थानीय डिजिटल विज्ञापन के गर्नुपर्दछ
त्यहाँ चार क्षेत्रहरू छन् जुन व्यवसायहरूले हेर्नु पर्छ कि तिनीहरू डिजिटल संसारमा बाँच्न सक्छन्। तिनीहरूले सबै व्यवसायको लागि काम नगर्न सक्छन्, तर तिनीहरू उत्कृष्ट सुरूवात विन्दुहरूको रूपमा सेवा गर्दछन्।
१. स्थान आधारित विज्ञापन फेसबुक, वा इन्स्टाग्राम प्रयोग गरेर।
२. स्टार्टअपको लाभ उठाउनुहोस् जसले ग्राहकलाई अर्डर गर्न र अनलाइन खरीद गर्न सिमलेस, इन्स्टाकार्ट, क्याभियार, र पोस्टमेट गर्न मद्दत गर्दछ।
Superior. राम्रो स्टोरमा अनुभव वा स्थानहरू प्रदान गर्ने जुन ग्राहकहरूलाई सुविधाजनक किनमेलको साथ प्रस्तुत गर्दछ।
E. ई-वाणिज्य च्यानलहरू निर्माण गर्‍यो। यीसँग, एकले लाभ उठाउनको लागि उपकरणहरू जस्तै सामाजिक मिडिया (फेसबुक) मार्फत पुनः लक्षित बिक्री बढाउनको लागि छ।
कडा प्रतिस्पर्धाको कारण साना व्यवसायहरूका लागि यो सजिलो छैन। आशा छ, Semalt बाट अंतर्दृष्टि केही प्रासंगिक रहनको र फलफूल गर्न जारी गर्न के गर्न सक्छन् केहि चीजमा प्रकाश पार्छ।